- UNODC မှ Anti-Corruption and Law Enforcement Expert Mr.Raghavan Kuppuswamy အား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
Created By : 31-Jul-2018	Published In: နိုင်ငံတကာ အစည်းအဝေး Hits: 218
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်ရုံးမှ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဒေါ်မြတ်မြတ်စိုး ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည် UNODC မှ Anti-Corruption and Law Enforcement Expert Mr. Raghavan Kuppuswamy အား ၅-၇-၂၀၁၈ ရက်နေ့ (၁၀:၀၀) နာရီ မှ (၁၂:၀၀) နာရီထိ မြန်မာနိုင်ငံ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်ရုံး၊ စုပေါင်းခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
- ရုရှားနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Dr. Nikolay Listopadov နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
Created By : 31-Jul-2018	Published In: နိုင်ငံတကာ အစည်းအဝေး Hits: 220
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြည် ဦးဆောင်သော အဖွဲ့အား ရုရှားနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Dr. Nikolay Listopadov ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် ၄-၇-၂၀၁၈ ရက်နေ့(၁၀:၀၀)နာရီမှ (၁၀:၃၅) နာရီထိ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်ရုံး၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခန်းတွင် လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
- မြန်မာနိုင်ငံ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုဆိုင်ရာ အရပ်ဖက်မဟာမိတ်အဖွဲ့ (Myanmar Alliance for Transparency and Accountability-MATA) အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
Created By : 31-Jul-2018	Published In: နိုင်ငံတကာ အစည်းအဝေး Hits: 297
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြည် ဦးဆောင်သော အဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုဆိုင်ရာ အရပ်ဖက်မဟာမိတ်အဖွဲ့ (Myanmar Alliance for Transparency and Accountability-MATA) အဖွဲ့အား ၁၁-၇-၂၀၁၈ ရက်နေ့(၁၃:၀၀)နာရီမှ (၁၄:၄၅) နာရီထိ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌရုံး၊ အစည်းအဝေးခန်း၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
- တရုတ်နိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Hong Liang နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
Created By : 06-Jul-2018	Published In: နိုင်ငံတကာ အစည်းအဝေး Hits: 187
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြည် ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ အား တရုတ်နိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Hong Liang ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် ၆-၆-၂၀၁၈ ရက်နေ့ (၀၉:၀၀)နာရီမှ (၀၉:၅၀) နာရီထိ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်ရုံး၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခန်းတွင် လာရောက်ဂါရဝပြု တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
Showing 21 to 24 of 148 (37 Pages)